dry cough – Healthy Life Journal
All posts tagged "dry cough"
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ချောင်းဆိုးတာက လည်ချောင်းကနေ အချွဲ ဒါမှမဟုတ် ပြင်ပလှုံ့ဆော်တဲ့ ယားယံမှုတွေကို ရှင်းထုတ်တဲ့ သဘာဝတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပါ။ ချောင်းဆိုးတာက သုံးပတ်အောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒါကို ရေတိုချောင်းဆိုးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သုံးပတ်နဲ့ ရှစ်ပတ်ကြား ချောင်းဆိုးတာကို အလယ်အလတ်...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ခြောက်လကျော်ပါပြီ။ ချောင်းဆိုးတာတစ်ပတ်ကျော်နေလို့ ဘာဆေးသောက်ရမလဲ သိချင်လို့ပါ။ Thein Htike San(FB) A. ဒီရာသီမှာတော့ အေးလာတယ်၊ အမှုန်အမွှား ဖုန်ထူတယ် . . ဒါတွေကြောင့် ချောင်းဆိုးတဲ့လူနာတွေ...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ချောင်းခြောက်ဆိုးတဲ့ဝေဒနာက အချိန်အတော်များ များမှာ မသက်မသာခံစားရတဲ့ဝေဒနာပါ။ ချောင်းဆိုး တာက (၁)သလိပ်ထွက်တဲ့ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ (၂) သလိပ် မထွက်ဘဲ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာက ဓာတ်မတည့်မှု၊ အအေးမိခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။...